Ndepụta ICO kacha mma 2021 | Ndepụta kachasị nke mkpu na nyocha ICO | Ọrụ Ndepụta ICO
Ndepụta ICO N'ịntanetị - Mba 1 ICO Ndepụta Platform na 2021
Ndepụta ICO n'ịntanetị bụ otu n'ime weebụsaịtị 2021 ICO kacha mma nke na -emelite oge niile gbasara ICO kacha mma itinye ego na ya. Ịchọrọ idobe ICO gị n'elu ikpo okwu anyị pịa Bugharịa bọtịnụ ICO n'okpuru:
ICO kacha mma Iji tinye ego na 2021 - Ndepụta ICO Top 2021
Ndị ICO kachasị elu
ICO nọ n'ọrụ
Quarashi na -enye ike nke mbụ mepere emepe n'otu ikpo okwu lekwasịrị anya na: Mkparịta ụka nzuzo, Mgbasa ozi agbasaghị, IDO Launchpad, Blockchain Interfaced Multi Crypto obere akpa. August 1, 2021 October 31, 2021 9.9
Ebumnuche Coinjoss bụ inye ndị ọrụ ahụmịhe enweghị ọfụma na ijikwa cryptocurrencies ha. Coinjoss bụ gburugburu ebe obibi nke na -amalite site na ngwa ngwa mgbanwe ngwa ngwa ya, na -elekwasị anya na mfe iji interface maka ndị ọrụ iji ọnụ ahịa kacha mma n'ahịa zụta cryptocurrencies ha. October 15, 2021 November 30, 2021 9.6
Emebere ụdị KIND iji mee ka ịzụta na ire diamonds dị n'ịntanetị. Nke a bụ akara akụkọ ihe mere eme! Ebumnuche imepụta akara ngosi a bụ na kohinoor diamond abụghị naanị otu n'ime ụwa. N'ezie, enwere ọtụtụ n'ime ha n'ụdị tokens n'ụwa. Na mmadụ niile nwere ike idobe ọtụtụ diamond a dị oke ọnụ na obere akpa ha. October 20, 2021 December 5, 2021 9.6
Mkpụrụ ego ego
Ndị na-enweta ego nbinye ego (RVC) na-akwado ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu iji bulie ahịa, ahịa na ihe omume ọha. Mmalite ndị na -enweta ego na -ekenye ihe ruru 10% nke ego ha na -enweta n'ịzụ ahịa RVC site n'ahịa, na -ebelata mbubata na ịbawanye ọnụ ahịa. October 15, 2021 November 30, 2021 9.8
BERTINITY bụ ihe ọhụrụ na -akpata ọgba aghara na enweghị aha zuru oke yana enweghị KYC ego blockchain. Ecosystem BERTINITY nwere akụkụ 5 dị mkpa, gụnyere ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ crypto, mgbanwe etiti, ICO launchpad, njikwa ngwaahịa nchekwa nchekwa gburugburu ụwa na mkpụrụ ego ala. October 20, 2021 November 20, 2021 9.2
Mkpụrụ ego Dhabi
Dhabicoin bụ akụ nke akụ dijitalụ iji jikọta ọtụtụ netwọkụ n'ime otu ihe okike dijitalụ nke ga -enye ndị ọrụ ohere ikwurịta okwu, ịmụ ihe, ịkwụ ụgwọ, na ịrụ ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. Ebumnuche ya bụ ịkwalite akụ na ụba UAE ma gbanwee ahịa ụwa. September 24, 2021 October 25, 2021 9.6
Veritise na -enye nkwenye, njirimara, nchịkọta data na ọrụ nyocha maka ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu. Isi ọrụ ndị a bụ blockchain ọkwa Veritise Enterprise maka ikike ya na-emekọrịta na chekwaa data na enweghị nchekwa. September 3, 2021 December 31, 2021 9.8
Financio bụ mgbanwe na -agbasaghị nke na -aga n'ihu na Binance Smart Chain, yana ọtụtụ atụmatụ ga -enyere gị aka irite ụgwọ ọrụ crypto dị elu. September 15, 2021 October 30, 2021 9.5
Okpukpo ego nke ndi mmadu na-eme ka ndi mmadu tinye ego ha n'enye ego iji kwadebe ego ha gha eme. July 24, 2021 October 31, 2021 9.1
Ntọala World X
Ntọala World X bụ Token nke obodo na-akwalite, na-egosipụta n'ụzọ ziri ezi. Amalitere site na ezigbo Binance Smart Chain BSC. Anyị na -enyere aka na 10 % nke Token Sale anyị na ọrụ ebere atọ anyị. October 6, 2021 January 6, 2021 9.0
Kai Ken inu bu onye nwe obodo, akara aka DeFi. Na ahia ọ bụla, ọrụ atọ dị mfe na-eme: Ọkụ, Nnweta LP, na mmepe. Site n'ụkpụrụ tokenomics a, a na-erite oru ahụ dum n'ogo ọ bụla. Ndị azụmahịa Kai ken baara ndị niile nwere ya uru. June 2, 2021 August 31, 2021 9.5
ICO Okratech ga-abụ ikpo okwu yiri Freelancer.com na Upwork.com mana ọ ga-anabata cryptocurrency. Ortcoin ga - emepụta usoro ọrụ blockcheni na - enyere ndị ahịa na freelancers aka ijikọ, na - enye azụmahịa zuru oke yana nchekwa siri ike site na nkwekọrịta smart - ebe ọ bụla ị dabere. August 2, 2021 November 30, 2021 8.4
Caizcoin bụ nke mbụ Islamic decentralized blockchain na ike ilekota nke na-enyere aka ịnyefe ego n'etiti ndị mmadụ gburugburu ụwa na-agbaso iwu ego Islam. June 1, 2021 October 31, 2021 9.6
Epsilon bụ ihe ọchụchọ obodo na-akwalite, nchekwa ọha na mepere emepe. Epsilon nwere obere akpa ya na -agbasaghị yana mgbanwe mgbanwe na -agbasaghị. Ọ na-agba n'elu ikpo okwu Binance Smart Chain na ọ bụ akara BEP-20. September 4, 2021 December 13, 2021 9.5
EMCODEX na -anọchite anya: Mgbanwe Mgbasa Ọha na -apụta. Ihe a na -akpọ ahịa ngwa ahịa abụghị ihe ọzọ karịa ahịa ebe a ga -azụrịrị ngwongwo. Na akụ na ụba, okwu ngwaahịa bụ ezigbo ihe eji eme ahịa nke na -agbanwegharị na ụdị ngwaahịa ndị ọzọ. Nwere ike 18, 2021 August 28, 2021 9.2
Anyị na -akwado nnukwu ihe nkiri maka ndị na -ese ihe kacha elu, n'ámá egwuregwu ma na -enuba nde mmadụ gburugburu ụwa. Na -enye ụlọ ọrụ egwu ike imepụta ụzọ mbata ego ọhụrụ site n'ọma ahịa anyị n'ịntanetị na cryptocurrency. July 28, 2021 September 30, 2021 9.5
Nexxus wardsgwọ Ọrụ
Nexxus Rewards na -enye usoro ịre ahịa nkwado pụrụ iche nke obodo na -ebuli obodo niile. Ọ na-enyere ndị ọrụ ebere obodo na ndị otu na-anaghị akwụ ụgwọ aka itinye ego na-akpata mkpa mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke na-etinye ego na akaụntụ akụ ha kwa izu n'aka ndị na-azụ ahịa na-azụ ahịa. January 16, 2020 January 22, 2020 7.8
2local kwadoro itinye aka na ihe ohuru ma na adigide ahia ya na nlekota onodu gburugburu ebe obibi na ihu igwe, oru oma, na oganihu aku na uba. Site na nke a, 2local chọrọ itinye aka na mmekorita ụwa ọhụrụ nke dị mkpa iji mezuo ebumnuche UN. Na mgbakwunye, ihe a chọrọ site na onye ọ bụla! October 17, 2019 December 31, 2019 9.9
Encores na-aga ịgbanwe ụlọ ọrụ otu ụzọ-ụzọ-enweta ego iyi na ịkesa uru n'etiti ndị ọrụ site na ịkwụghachi ha ụgwọ maka ịntanetị ma ọ bụ ịrụ ọrụ ndị ọzọ dị mfe, dị ka ịkparịta ụka n'socialntanet, mgbasa ozi, wdg. October 1, 2019 Nwere ike 31, 2019 7.5
Robinhood iwebata. Itinyeghachi ntụkwasị obi na ịgba chaa chaa. September 14, 2019 February 2, 2020 8.9
Flas Exchange bu uzo ahia zuru oke nke na enye ndi di iche iche di iche iche di iche iche. Dika ikpo okwu di omimi, nke kwesiri ntukwasi obi na nke di elu di elu maka ahia ahia, Flas Exchange ga emeputa uzo nke di elu iji zute ihe di iche iche di omimi nke ndi okacha amara na ndi oru. November 8, 2019 February 9, 2020 8.3
GRAYLL na -ekesa teknụzụ Ledger, AI na Mmụta igwe etinyere na usoro ego algorithmic nke na -emepụta uru bara uru na -akpaghị aka, na -enweta site na ngwa mkpanaaka enyi & ngwa weebụ. Anyị na -elekwasị anya na akụ dijitalụ na ahịa akụ tokenized. Enwere ike itinye sistemụ maka ihe ọ bụla, dịka ọmụmaatụ ngwa ahịa, nka, ezigbo ala, metrik ihu igwe, usoro mgbasa ozi mmekọrịta na ihe ndị ọzọ. July 1, 2019 February 17, 2020 9.1
HiveNet ga -eweta usoro teknụzụ iji rụọ ọrụ oge kọmputa ndị a na -abaghị uru site na iwulite netwọkụ kọmputa na -ekesa. Nke a ga -enyere ndị nwe kọmpụta aka irite uru na oge kọmputa ha na -abaghị uru September 24, 2019 November 23, 2019 7.9
Mindsync bụ ikpo okwu na obodo zuru ụwa ọnụ nke ndị mmepe mmụta igwe, ndị ọkà mmụta sayensị data na ndị ọkachamara AI etinyere. Obodo a ga -enwe ike imekọ ihe ọnụ nakwa isonye n'asọmpi n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu na ndị otu iji dozie nsogbu dị iche iche. March 1, 2019 April 30, 2021 10.8
Pawtocol LLC, ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ dị obere na Delaware ("Pawtocol", "anyị", "anyị", "anyị") na-achọ iwere ụlọ ọrụ na-elekọta anụ ụlọ n'ime afọ blockchain site n'ịzụlite ikpo okwu nwere akụ na ụba na gburugburu ebe obibi. Akwụkwọ a na -akọwapụta ọhụụ anyị na nkà ihe ọmụma n'azụ Pawtocol na ihe kpatara anyị ji eburu ọrụ a n'ahịa, yana ọganiihu anyị ruo taa yana ihe kpatara anyị ji bụrụ ndị otu kwesịrị ekwesị. July 1, 2018 December 31, 2018 7.9
SynchroBit ™ bụ otu n'ime nnukwu ọrụ nke modulu ego nke gburugburu ebe obibi SynchroSphere®, nke na -enye nkwado akụ na ụba maka ọrụ ndị ọzọ na modulu nke gburugburu. A ga -ejikọ ikpo okwu nke ọma na nyiwe ego ndị ọzọ nke SynchroSphere® iji mepụta ahụmịhe ndị ahịa enweghị nkebi ma nye ndị ọrụ ọnọdụ azụmahịa na -arụpụta nke ọma, nke ziri ezi, nke dị nchebe dabere na teknụzụ blockchain na cryptocurrencies. August 1, 2019 December 28, 2019 8.2
TecraCoin na-eme atụmatụ maka mmepe nke Tecra Investments n'ọdịnihu. TecraCoin nwere ikike ịgbanwe atụmatụ ndị a ma ọ bụ zere itinye ya n'ọrụ naanị n'uche ya. January 17, 2019 January 16, 2020 7.2
Ọrụ CoinCasso bụ ngụkọ zuru oke na nke ọchịchị onye kwuo uche ya maka ndị mmadụ. Echiche anyị dị iche kpamkpam n'ihi na anyị chọrọ ka obodo nwee ike kpebie ma metụta mmepe mgbanwe anyị na ụlọ ọrụ niile. Ọ bụ ya mere anyị ji enye ndị ọrụ anyị ohere ka ha bụrụ ndị nwe ọrụ CoinCasso. October 21, 2018 December 31, 2019 8.2
Ebumnuche Karuschain bu n'obi imetụ ọtụtụ ntinye aka na ntinye nke igwe ọkọnọ dị oke ọnụ ahịa dị ugbu a. A na -emepe ikpo okwu Karuschain iji belata nsogbu na ihe ịma aka na -eche ndị niile sonyere na yinye ọla dị oke ọnụ ahịa. January 14, 2020 February 14, 2020 7.2
Ọkwa01 bụ mgbanwe mgbanwe nke ndị ọgbọ nke ọgbọ nke mbụ site na iji teknụzụ jikọtara ọnụ nke Artificial Intelligence (AI) na idozi na Blockchain. Level1 na-ejikwa teknụzụ blockchain na teknụzụ cryptocurrency, iji mepụta mgbanwe (nhọrọ) mgbanwe & azụmaahịa ebe a na-eduzi azụmaahịa ego na forex, ebuka, ngwa ahịa na cryptocurrencies na ntọala ndị ọgbọ, na-enweghị mkpa maka onye na-ere ahịa n'etiti. July 1, 2018 December 31, 2018 9.1
SaTT bụ akara ngosi dabere na teknụzụ blockchain nke na -enye ohere mgbanwe mgbasa ozi na ịkwụ ụgwọ ndị na -ege ntị. Smart Contract na -achịkwa SaTT nke na -edepụta onyinye mgbasa ozi yana data niile echekwara na blockchain Ethereum. Nkwekọrịta Smart na -edobe ọnọdụ maka ikere òkè na mkpọsa, na -akọwapụta ihe ịga nke ọma, na -ekwe nkwa mmegharị ikpeazụ. Nwere ike 1, 2018 December 31, 2020 8.3
Gath3r na-agbaso ụzọ ọhụrụ maka igwupụta ihe n'ime ihe nchọgharị site na iwebata mkpụrụ ego ala dị iche iche yana mgbakwunye agwakọta. Mkpụrụ ego GTH na -arụ ọrụ nke ọma na ihe nchọgharị na ngwa, na enweghị nsogbu UI, si otú a na -ahapụ mkpụrụ ego ọhụrụ na nke dị adị iji hashrate Gath3r. January 9, 2020 January 11, 2020 6.3
Ngwọta Bethereum na -eji teknụzụ Blockchain eme ihe iji hụ na ahụmịhe ịkụ nzọ kachasị dị nchebe. Enweghị onye ọ bụla na -etinye aka: Ndị na -egwu egwuregwu na -emepụta nzọ, debe iwu, ma na -enye ego maka ịkwụ ụgwọ ụgwọ. Nkwekọrịta Smart na -echebe ego ma na -ekesa mmeri na -akpaghị aka dabere na ọnọdụ nzọ na nsonaazụ. October 1, 2018 December 31, 2018 8.4
IBNIF CINEMADROM - Nke a bụ International Blockchain Network of Independent Cinematographers, nke e wuru na teknụzụ ọhụrụ, na ụkpụrụ ego nke mmekọrịta n'etiti ndị niile na -emepụta ihe nkiri, ndị edemede, ndị na -emepụta ihe, ndị ọkachamara, ndị na -etinye ego na ndị na -ekiri ya. N'isi ya, IBNIF CINEMADROM na -eji teknụzụ blockchain February 3, 2020 April 30, 2020 6.9
MyTVchain bụ igwe onyonyo web izizi nke ewepụtara maka klọb egwuregwu na ndị na -eme egwuregwu, ma na -ekwupụta mmeghe nke ọwa TV Sport Sport France, telivishọn Egwuregwu Egwuregwu. Emebere ọwa a site na ntinye aka nke Kọmitii Olympic na Egwuregwu Mba France (CNOSF), ma raara onwe ya nye ịkwalite ọzụzụ niile, ndị otu niile na klọb ha. February 29, 2020 March 27, 2020 6.1
BILLCRYPT pl bụ sistemụ mwekọrịta zuru ụwa ọnụ maka ụlọ ọrụ nnọchite anya Blockchain-BR. Otu akụrụngwa nwere ọtụtụ ihe na -ejikọ ọfịs ndị nnọchi anya Blockchain n'ụdị ngwa agbasaghị na blockchain (DApp). Otu ikpo okwu pụrụ iche na -ejikọ uru niile nke ezigbo ụwa na oghere mebere, Internetntanetị a ma ama na blockchain. July 3, 2019 April 23, 2020 7.4
Kedu ihe ndepụta ICO dị n'ịntanetị?
Ndepụta ICO N'ịntanetị bụ obodo kachasị ukwuu ebe ndị mmadụ na-abịa depụta ICO ha Kemgbe afọ 2018, anyị na-emelite ozi gbasara ICO kachasị elu dị na ahịa. Enwere otutu webusaiti ICO edeputara na intaneti ma obughi ndi nile di nchebe na ndi kwesiri ntukwasi obi itinye ego dika otutu ha adighi emelite ha oge nile.
Ndị ọchụnta ego ahụ nwere mmasị itinye ego na ICO. Ha nwere ike lelee ogo ICO na webụsaịtị anyị wee tinye ego ka ọ ga -enyere ha aka ịchọ ICO kacha mma, Pre & na -abịa.
Ihe onyinye ICO, ma obu onyinye mbu nke mbu, nke ufodu ana akpo “ire akaebe” ma obu “onyinye izizi”, bu omume nke imerime ndi mmadu maka oru ngọngọ, ebe ana enye ndi oru ego ego ego ma obu ihe akaebe tupu edebanye ha na ahia. , dị ka mgbanwe.
A dụrụ ya ọdụ ime nnyocha sara mbara banyere ọrụ ahụ tupu itinye ego. Nke a gụnyere ịgụ akwụkwọ ọcha, ịrụ ọrụ ma ma ọ bụ ICO na-enye ezigbo uru ụwa ma na-eme nnyocha otu ahụ n'ụzọ zuru ezu.
Nke a bụ otu ị ga - esi sonye na ICO:
Nweta mkpuchi dị mkpa nke ICO na-anabata dị ka itinye ego.
Gbaa mbọ hụ na obere akpa mkpuchi dakọtara na akara aka ICO.
Atọ atọ lelee adreesị nkwụnye ego site na isi mmalite ndị ọrụ.
Kedu ihe bụ ICO Soft Cap?
Otu ICO emezuola ebumnuche ya ozugbo iru okpu ya dị nro. Okpu dị nro bụ ntakịrị ego achọrọ maka ọrụ ahụ ịga n'ihu.
Kedu ihe bụ ICO Hard Cap?
Imirikiti ICOs ga-enwekwa okpu siri ike, nke bụ oke ego ha ga-anabata na itinye ego. Ọ bụrụ na ICO erughị iru okpu ya dị nro, ọtụtụ ICO ga-eweghachi ego nye ndị na-etinye ego.
Kedu ihe bụ ICO Tokens?
Enwere ike ịkọwa Tokens dị ka akụ akụ enyerela ụlọ ọrụ na-akwado ọrụ site na ICO, nke nwere ike ịbụ akụrụngwa ịkwụ ụgwọ (ngalaba ego) naanị na gburugburu ebe obibi ọrụ na-enye atụmatụ ndị yiri ya dịka mkpụrụ ego, mana onye nwe ha nwekwara ikike ndị ọzọ na netwọkụ , dị ka ikike ịtụ vootu, ikike iketa oke ego, ikike inweta akụkụ ego na ndị ọzọ. Ejiri Tokens dị ka nkwekọrịta "amamịghe" dabere na netwọkụ Ethereum ma ọ bụ Wave. Enwere ike ịmata Tokens dị ka akụrụngwa ego ma ọ bụ ngwaahịa (ma ọ bụ ọrụ) nke onye nwe ya nwere ike iji rụọ ọrụ, dabere na njirimara nke cryptocurrency.
Kedu ihe bụ ICO Whitepaper?
ICO Whitepaper bụ akwụkwọ enyere n'aka nzukọ / ụlọ ọrụ na-ewepụta tokens iji nweta ego iji kwado otu ọrụ. Enweghi ihe ederede na onodu nke iwu a gha aghaghi iru. Akwụkwọ a na-enwekarị ozi gbasara usoro nke ịnye tokens ahụ, ozi gbasara ọrụ a ga-etinye n'ọrụ, yana ndị otu na-akwado ọrụ ahụ.
Kedu ka onyinye mkpụrụ ego mbụ (ICO) si arụ ọrụ?
Otu ICO bidoro site n'ụdị nkwupụta ụfọdụ, nke a na-akpọkarị akwụkwọ ọcha na-akọwa nkọwa nke ọrụ ahụ, atụmatụ atụmatụ, mmefu ego na ebumnuche yana ụfọdụ mkparịta ụka banyere otu a ga-esi kesaa mkpụrụ ego ma ọ bụ akara. (A na-enyekarị tokens iji gosipụta inwe nke ọrụ ma ọ bụ ọgbakọ kwụụrụ onwe ya, mana mkpụrụ ego na-abụkarị ego ego.)
Imirikiti ICO na-ekpebi ọnụ ọgụgụ nke tokens ma ọ bụ mkpụrụ ego enyere tupu ere ya. Enwere ike inye ndị ọchụnta ego na-azụta n'oge gara aga site na ịkwụ ụgwọ dị ala kwa mkpụrụ ego. Mana ọnụahịa nwere ike ịgbanwe, ma ọ bụrụ na ọtụtụ mmadụ azụọ, ị nwere ike ịkwụsị obere akara.
Fọdụ ICO nwere ebumnuche a kapịrị ọnụ iji nweta ego ma nwee ike idozi ọnụahịa ha n'oge ere ha niile. Ndị ọzọ na-edozi ọkọnọ ma dozie ọnụahịa dabere na ọchịchọ ahụ, na-abawanye ka o kwere mee na enwekwara ndị na-eweta nnyefe dị ike mgbe emepụtara mkpụrụ ego ọhụrụ mgbe mmadụ zụtara otu.
A na-emepe ọtụtụ ICO n'adabereghị, ndị na-ewepụta ya na-achịkwa ya na weebụsaịtị ma ọ bụ ikpo okwu ya. Nke a mere n'ihi na a na-enyekarị onyinye ndị a pụrụ ịtụkwasị obi site na mgbanwe ma ọ bụ ọrụ azụmahịa nke nwere ike ikwe ka ndị na-etinye ego ụfọdụ nchebe megide ndị aghụghọ.
Ọdịiche dị n'etiti ICO na IPO
Onyinye ihu ọha izizi (IPO) bụ usoro yiri nke ICO nke onye na-achụ ego na-enweta oke na oke nke ụlọ ọrụ ahụ. Nke a megidere ICO, nke akara azụmaahịa nke ndị na-azụ ego zụtara nwere ike itinye uru ma ọ bụrụ na azụmaahịa ahụ na-arụ ọrụ nke ọma.
Maka ICO, ndị na-etinye ego na-azụta cryptocurrencies ọhụụ n'ebumnuche nke ị nweta uru mgbe ọnụọgụ bara ụba. Nke a dị ka onye na-enweta uru mgbe ngwaahịa ha zụrụ na mgbanwe ngwaahịa na-arị elu. ICO dị iche na ịzụta mbak na ahịa ahịa n'ihi na mgbe ị na-etinye ego na ihe ngosi ọhụrụ, ị gaghị enwe ike ịkekọrịta nwe ụlọ ọrụ.
Kedu ihe kpatara mbido ICO ji ewu ewu?
ICO bu uzo dijitalụ nke otutu mmadu. Ejila ya rụọ ọrụ nke ọma iji kwado ego cryptocurrencies, nke oge a na-aga nke ọma ma bulie nnukwu ego nke na-agaraghị enwe ike ịme site na nchịkọta ọtụtụ ndị mmadụ. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe atụ nke oru ngo ICO na-aga nke ọma: Stratis, Ethereum, Iota, Viberate & Edgeless
Etu esi etinye ICO?
Ndị ụlọ ọrụ Crypto-ego chọrọ inweta ego site na ICO kwesịrị ịnye ụfọdụ ozi, gụnyere nkọwa nke ọrụ ahụ, ebumnuche nke ọrụ ahụ, ihe achọrọ maka itinye ego, akụkụ nke ihe akaebe nke ụlọ ọrụ ga-edebe, oge nke oru ngo ICO na udiri ego mebere nke oru a.
Ọ bara uru isonye na ICO?
Ihe kachasị mkpa bụ ịghọta na ị na-etinye ego na echiche mmadụ, nke nwere ike ọ gaghị aba uru. N'aka nke ọzọ, akụkụ nke cryptocurrency na-arị elu ugbu a. Nke a bụ ezigbo nkwa maka nnukwu ego, ma ọ bụrụ na ịchọghị ịhapụ ohere ịga n'ihu taa.
Itinye ego na ICO
Ntinye ego ICO nwere ma oke ọghọm yana ọghọm ma e jiri ya tụnyere Investments edepụtarala cryptocurrency. Yabụ, ndị nwere akụ na ụzụ, ndị zụtara cryptocurrency ọhụụ na ICO dị ka o kwere mee, nwere ike inwe olile anya maka ịrị elu ọnụ ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ndị tinyere ego na Ethereum ICO na 2014 nwetara nnukwu uru. N’ime ụbọchị iri abụọ na abụọ, ego ruru nde dọla iri na asatọ. Ether gbanwere na ICO maka mkpụrụ ego 42. Ọbụna na ndepụta mbụ na ngwaahịa mgbanwe, ndị na-etinye ego nwere obi ụtọ banyere ọtụtụ narị percent abawanye na uru. Taa Ethereum's cryptocurrency Ether bụ Coin nke atọ kachasị sie ike n'ahịa ma na-ere ahịa ugbu a na $ 18.
Uru nke Investment ICO
Ndị ICO na-ekwe nkwa oke mmeri
Onye ọ bụla na-enyocha ICO ga-amụta banyere ọtụtụ ikike nke ngwa nke teknụzụ Blockchain
Ndị na-etinye ego na-emetụta ọdịdị nke azụmahịa crypto-business
Soro na ICOs kwụ ọtọ
Ọghọm nke itinye ego ICO
Ọtụtụ okwu aghụghọ na-etinye aka na ICO dị oke egwu
A obere akpa bụ iwu maka ikere òkè
A na-atụ aro tupu ị mee nchọpụta tupu oge eruo, ọ chọrọ oge dị ukwuu
Na ahịa bear na-aga n'ihu, ọ na-esiri ndị Startups ike ịkwado onwe ha
Nke a bụ otu ị ga -esi tinye ego na ICO:
Iji tinye ego na ICO, ị ga-agagharị na weebụsaịtị anyị iji chọta ọrụ ndị nwere ike ịkwado nke chọrọ ego. Ozugbo ịchọtara ndepụta ọrụ ebe ị nwere ike ịhụ itinye ego gị, ịkwesịrị ịga na weebụsaịtị ha iji zụta akara ya.
Ofzụ nke cryptocurrency
Nyere na enwere ICO na mkpuchi, ọ bụghị na Fiat ego, ọ dị mkpa ịgbanwe ego maka cryptocurrency (ọkachasị Etherium).
Nyefee cryptocurrency ka oru ngo a ma nata nkwenye nke isonye
Inweta ego oru ngo na obere akpa mkpuchi
Ddọrọ mkpụrụ ego na mgbanwe crypto
Mgbe ọnụahịa ndị dabara na ọorụ ahụ ruru, ire na idozi nsonaazụ ego na-arụ
Usoro ICO nke ire ere gụnyere usoro nke na-eleba anya n'okwu nke ị nweta ego yana na mgbe enyere ihe dijitalụ n'ahịa dị ka mgbochi nke yiri mbak nke a kacha mara amara dị ka akara aka enyere na ọnụahịa ego nwere ike gbanwere maka ico cryptocurrency ndepụta site na ntinye ego nke mbu n'oge oru nke oru ngo. Anyị na-enye ihe ndepụta ico dị elu. Nke a bụ usoro usoro ICO atọ:
Na-adọ 1 ỌR B PR
Oge Abụọ Ahịa
Na-adọ III ÌGW S KWES .ROW
Agbanyeghị, enweghị usoro iwu guzobere nke na-ekpebi nhazi nke uto crypto ico na-ekpo ọkụ. Na nke mbụ, n'oge nke I, a na-ekwupụta ọkwa azụmaahịa na nkeonwe na ọ bụ naanị mgbe ahụ ka usoro nke abụọ na-amalite ịgbanwe ndepụta nke mbụ wee bịa Phase III ebe akara ndị ahụ dị njikere ịzụta maka ọha na eze maka ịmekwu ego.
Ndepụta ICO kacha mma:
Anyị nwere ndepụta ICO na-abịa nke na-aga arụ ọrụ n'oge na-adịghị anya. Anyị nwere ngalaba dị iche iche iji gosipụta ọhụụ ICO ndị na-abịanụ.
Ndepụta ICO nọ n'ọrụ:
Iji chọta ndepụta kachasị mma nke ICO ndị na-arụ ọrụ, ịkwesighi ịgafe weebụsaịtị dị iche iche ugbu a. Anyị na-enye ndepụta nke emelitere ugboro ugboro.
Ndepụta tupu ICO:
Pre-ICO dị ọnụ ala karịa ma ha bụkwa nhọrọ dị mma maka uru ọsọ ọsọ. N'oge a, Ha na-ewu ewu n'etiti ndị na-etinye ego maka inweta ọtụtụ. Yabụ, lee anya nke anyị Ndepụta tupu ICO taa.
Depụta ICO gị taa na weebụsaịtị anyị ma ruru ọtụtụ puku ndị na-etinye ego na gburugburu ụwa yana, ugbu a, anyị na-enye ndị kachasị ọsọ Ọrụ KYC maka ICO. Dejupụta ụdị kọntaktị anyị na tody na anyị ga-akpọtụrụ gị na elekere 24 na-esote.
E-mail Ndepụta Token:
Copyright © 2021 Ndepụta ICO n'ịntanetị. Ikike niile echekwabara.